China Black silicone mkpa eriri mkpofu egbugbu adịgide na uzo ntuziaka rụpụta na ụlọ ọrụ | MOLON
Igwe igbu egbugbu
Eriri igwe Machines
Switkwụ Gbanye & Clip orddọ
Atụmatụ igbu egbugbu
Studio ọnọde & Ngwongwo
Adịghị Ikuku Tattoo Pen Machine, High arụmọrục ...
Mee ka ise na asaa na-ese ihe osise ụgbọ ala ...
LBB attdị Mkpa Cartridges na adụ Membrane
Professional Tattoo Kwes Copier, Nyefee ngwa nbipute ...
Nnukwu ikike 1800mAh Oge na ebe nchekwa nọchiri Ta ...
Iphise attdị Ike Ike
Black silicone mkpa eri mkpofu egbugbu adịgide na uzo uzo
Black Silicone Disposable Tattoo adịgide na doro anya n'ọnụ
Size / mbukota
16mm 40pcs / igbe
19mm 30pcs / igbe
25mm 20pcs / igbe
30mm 15pcs / igbe
(1) .Professional New Tattoo Disposable Tubes nwere ergonomic, ederede, curvy tube design nke na-agaghị amị amị ma ọ bụ slide gburugburu ọkpọkọ ọkpọkọ mgbe ị na-arụ ọrụ.
(2) .tatoo disposable tube na ọhụrụ n'ọnụ, nkenke n'ọnụ size na-enye omenka a siri artwork.
(3) .High Ogo attdị Achọpụta Disposable Tube mepụtara na packing.Each ọnya mkpọ na-n'otu n'otu kaa akara, na tupu igba ogwu na EO gas.
(4). Ha niile ka nke ọgwụ na ahụ ike roba na igba ogwu maka otu ojiji
(5) .anyi nwere ike ime omenala-iji, gunyere adịgide agba, tinye akara ngosi nke gị na ihe ndị ọzọ.
Disposable adịgide - 100% Nhazi mbụ nke MOLONG, njigide ohuru na imepụta ihe eji eme ihe, ọrụ siri ike na ọdịdị ọhụụ, nke na-ewu ewu na ndị omenkà zuru ụwa ọnụ. Ihe ngwugwu mara mma: ọnya nke igwe na-ejikarị igwe eji aka ya arụ ọrụ, ịkpụcha akuku iji zere imerụ onwe gị ahụ. Elu àgwà n'ime na elu mbukota iji chebe grips na mbupu ụzọ. Onyinye bara ụba: 10 000 PC kwa ụbọchị ọrụ, 300 000 PC kwa ọnwa dị ka ihe nkịtị, oge ọrụ nwere ike ịnweta karịa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta egbugbu egbugbu. Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke anyị, na ndị ọrụ ndị otu ọrịre ọkachamara na ndị ọkachamara nyocha na ndị mmepe. Anyị nwere ike ịmepụta igwe egbugbu, njide, ndụmọdụ, ike ọkọnọ, akụkụ mgba ọkụ ụkwụ, ụdọ clip, agịga tattoo na ngwa ndị ọzọ a tụrụ. Anyị raara onwe anyị nye bute ngwaahịa na ọrụ dị elu. A na-ebupụ ngwaahịa anyị na ụwa niile dabere na ọnụ ahịa asọmpi, ezigbo ọrụ na mbupu ngwa ngwa. Nwere ike ijide n'aka na ị na-enweta ngwaahịa ndị nwere ogo kachasị mma na teknụzụ dị elu ma ọ bụrụ na ịhọrọ ngwaahịa anyị.
Ebumnuche anyị bụ ịzụlite mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ahịa anyị. Iji mezuo ebumnuche a, anyị na-enye ndị ahịa anyị dị ugbu a ngwaahịa ọhụrụ na atụmatụ dị elu. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma. Anyị na-atụ anya ịbụ onye ọrụ azụmaahịa gị n'ọdịnihu dị nso.
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara Switkwụ Gbanye Tattoo Pedal
Osote: Ezi mma Tattoo Pen Kit Na-enweghị Aluminom Ileba TZ-008
Kemeghi akpati Cartridge adịgide
Kemeghi igbu igbu
Aluminum Tattoo adịgide
Ridgedị Cartridge Grip
Disposable Kemeghi Tattoo Cartridge adịgide
Disposable igbu katrij adịgide
Disposable Tattoo adịgide
Disposable Tattoo Pen Grips
Tgba Mgbu ígwè
Tatoo Cartridge Grip
Dị Mgbu Egbu egbugbu
Tattoo adịgide Cartridge
Egbu egbugbu na agịga
Egbu egbugbu na Atụmatụ
12 PC Isi ịkpọpu Ngwá Ọrụ cone Kit maka Ear Nav ...
Tattoo ink iko iko Tụkwasịnụ-adịgide Adịgide T ...
Best Quality anọte 2.4m Ọla kọpa Silicone Tatto ...
Disposable uzo tattoo agịga Atụmatụ
MO Okpueze Igwe Igwe Okpueze MO
Multifunctional haịdrọlik adiana kemeghi t ...
Zọ ịkwụ ụgwọ
Gini mere iji zuo ahia n'aka anyi?
Lọ ụlọ # 9 Zongtang District 1 322000 Yiwu Zhejiang China